Firefox 76.0.1 yakaburitswa kugadzirisa chete mashoma mabhugi | Linux Vakapindwa muropa
Ivo havana kuita ruzha rukuru, uyezve ndakazoziva pandakaburitsa iyo chinyorwa nezve EndeavorOS 2020.05.08, asi Mozilla yakatanga Chishanu chapfuura, Chivabvu 8 Firefox 76.0.1. Kuburitswa uku kwakashamisa nekuti ivo havana kugadzirisa chero zvakakura zvikanganiso zvekuchengetedza uye iyo yekutanga yakagadzikana vhezheni iyi Haana nesu kwevhiki. Ngazvive sezvazvingaite, kambani inozivikanwa nekuvandudza iyo gava browser ichave nezvikonzero zvekuburitsa iyi vhezheni uye yaita saizvozvo.
Pakazara, Firefox 76.0.1 yakagadzirisa mabhugi maviri, sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa: Mune yekutanga ivo vanotiudza kuti bhugi rakakonzera zvimwe zvinowedzera seAmazon Mubatsiri kuti aone zviitiko zvakawanda paConnects, zvaive "zvinokuvadza mashandiro", zvakagadziriswa. Yechipiri bug yakangobata 32-bit Windows masisitimu aine mamwe maNVIDIA madhiraivha akaiswa uye akakonzera kuparara.
Firefox 76.0.1 inouya sechishamiso neshanduko shoma kwazvo
Kune rimwe divi, ivo vaunzawo dzimwe shanduko, asi izvi zvatova zvevagadziri, sezviri kuratidzwa mu chinongedzo yakapihwa muFirefox 76.0.1 kuburitsa noti. Pakati pavo tine maAPI matsva, senge iyo inogadzira Firefox tsigira default audio maworklet, nerutsigiro rwe AudioContext.audioWorklet, iyo inotibvumidza kushandisa iyo AudioWorkletProcessor uye AudioWorkletNode maficha ekugadzirisa odhiyo munguva chaiyo kubva kune yakakosha tambo. Firefox 76.0.1 inotsigirawo iyo CSS4 color system, pakati pezvimwe zvinhu zvataurwa mune iyi link iripamusoro.
Tichifunga kuti uku kuburitswa kwekuchengetedza, hatigone kuziva kuti Mozilla ichaburitsa riini v76.0.2 yebrowser yayo, asi isu tinoziva izvozvo Firefox 77 ichavhurwa zviri pamutemo muna Chikumi 2. Parizvino, chega chinhu chitsva chakasimbiswa neFirefox mune iyoyo vhezheni ndiyo inoverenga «Bhurawuza.urlbar.oneOffSearches sarudzo yabviswa. Kuvanza mabhatani-amwe bvisa injini dzekutsvaga pane iyo peji: zvido # zvekutsvaga".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 76.0.1 yakaburitswa kugadzirisa chete mashoma emabhugi
EndeavorOS 2020.05.08 yasvika ichivandudza iyo i3-wm, kugadzirisa matambudziko nekugadzirisa mapakeji